ချင်းမိုင်ဟိုတယ် | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
Category Archives: ချင်းမိုင်ဟိုတယ်
The Secret Jewel This is the place, you will never forget. Rachamankha, located in Chiang Mai Old Town, is where love and treasure come together side by side and sometimes blend in whth each other. Artistic influences from Lanna art and Chinese antiquities, temple-style architecture toahaven of peace, this combination invites guests … ဆက်ဖတ်ပါ
Under the spell of an Angel’s Charm Of strategic importance since it first straddled the foothills of Chiang Mai’s Doi Suthep, today Baan Deva Montra, has been restored asahidden gem among the unique charm of the nation. Various types of villas and garden cottages are the focus of relaxation and reflect mood of … ဆက်ဖတ်ပါ
The Wellness of Symphony Possibly the only place in Chiang Mai city, ဘယ်မှာဆေးရွက်ကြီးခြံများနှင့်ကုသကျီငြိမ်းချမ်းသောဥယျာဉ်တော်သို့ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်. အခန်းနှစ်ခန်းနှင့် thirty ည့်သည်သုံးဆယ့်ခြောက် ဦး တို့၏ဤစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနေရာသည်သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များနှင့်ထူးခြားသောသမိုင်းကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်. Furnishings have been designed exclusively for each room along with … ဆက်ဖတ်ပါ